Chrome မှာ နိုင်ငံ ကန့်သတ်ချက် ရှိတဲ့ YouTube Video များကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > Chrome မှာ နိုင်ငံ ကန့်သတ်ချက် ရှိတဲ့ YouTube Video များကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ?
Chrome မှာ နိုင်ငံ ကန့်သတ်ချက် ရှိတဲ့ YouTube Video များကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:11 PM Andriod App, Android application, App, Tutorial, နည်းလမ်းများ
YouTube မှာ နိုင်ငံကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ချင်ရင် Virtual Private Network များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ Chrome Extension အသစ်တစ်ခုကလည်း ဒီလို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ VPN များဟာ အခမဲ့ အသုံးပြုရင် ဒေတာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး အခု Chrome Extension ကိုတော့ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သူ့ကို ဒီလင့် ကနေ Chrome Web Store မှာ အခမဲ့ အင်စတောလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ အမည်ကတော့ Stealthy ဖြစ်ပြီး အင်စတောလုပ်ပြီးရင် Extension Bar မှာ သူ့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချက်နှိပ်ပြီး သူ့ကို Enable လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် အစိမ်းရောင်ဖြစ်သွားတာကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ သူ့ကို Enable လုပ်ပြီးကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Enable/ Disable ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို Enable လုပ်ပြီးရင်တော့ နိုင်ငံကန့်သတ်ချက်ကြောင့် သင့်နိုင်ငံကနေ ကြည့်လို့ မရတဲ့ YouTube Videos များအားလုံးကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ သူ့ကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အခပေး အသုံးပြုရင်တော့ မြန်နှုန်းမြင့်မားပြီး ပိုမိုများပြားတဲ့ Streaming Services များကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Pro Version မှာ ပိုမိုများပြားတဲ့ နိုင်ငံများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်များမှာ သုံးနိုင်ဖို့ Apps များ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Firefox Browser အတွက်လည်း သူ့ရဲ့ Extension ကို ထုတ်လုပ်ပေးထား ပါတယ်။
Chrome မှာ နိုငျငံ ကနျ့သတျခကျြ ရှိတဲ့ YouTube Video မြားကို ဘယျလို ကွညျ့မလဲ ?
YouTube မှာ နိုငျငံကနျ့သတျခကျြရှိတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို ကွညျ့ခငျြရငျ Virtual Private Network မြားကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အခုတော့ Chrome Extension အသဈတဈခုကလညျး ဒီလို စှမျးဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ VPN မြားဟာ အခမဲ့ အသုံးပွုရငျ ဒတော အကနျ့အသတျရှိပွီး အခု Chrome Extension ကိုတော့ အခမဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
သူ့ကို ဒီလငျ့ ကနေ Chrome Web Store မှာ အခမဲ့ အငျစတောလုပျနိုငျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အမညျကတော့ Stealthy ဖွဈပွီး အငျစတောလုပျပွီးရငျ Extension Bar မှာ သူ့ကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ တဈခကျြနှိပျပွီး သူ့ကို Enable လုပျပေးပါ။ ဒါဆိုရငျ အစိမျးရောငျဖွဈသှားတာကို မွငျရမှာ ဖွဈပွီး ဒါဟာ သူ့ကို Enable လုပျပွီးကွောငျး ပွသခွငျးဖွဈပါတယျ။ သူ့ကို တဈခကျြနှိပျပွီး Enable/ Disable ပွုလုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ကို Enable လုပျပွီးရငျတော့ နိုငျငံကနျ့သတျခကျြကွောငျ့ သငျ့နိုငျငံကနေ ကွညျ့လို့ မရတဲ့ YouTube Videos မြားအားလုံးကို ကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ။ သူ့ကို အခမဲ့ အသုံးပွုနိုငျပမေယျ့ အခပေး အသုံးပွုရငျတော့ မွနျနှုနျးမွငျ့မားပွီး ပိုမိုမြားပွားတဲ့ Streaming Services မြားကို ကွညျ့ရှုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Pro Version မှာ ပိုမိုမြားပွားတဲ့ နိုငျငံမြားကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ သူ့ကို စမတျဖုနျး၊ တကျဘလကျမြားမှာ သုံးနိုငျဖို့ Apps မြား ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Firefox Browser အတှကျလညျး သူ့ရဲ့ Extension ကို ထုတျလုပျပေးထား ပါတယျ။
Ref : tnw Credit: Digitaltimes
Chrome မှာ နိုင်ငံ ကန့်သတ်ချက် ရှိတဲ့ YouTube Video များကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:11 PM Rating:5YouTube မှာ နိုင်ငံကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ချင်ရင် Virtual Private Network များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ Chrome Ext...